Denmark oo Sharuudaha Talaalka ku Xireysa Goobaha Shaqada ee Wadanka
HomeWararka DenmarkDenmark oo Sharuudaha Talaalka ku Xireysa Goobaha Shaqada ee Wadanka
November 11, 2021 Wararka Denmark, Wararka Maanta Somaliska 0
Dawladdu Denmark ayaa qaadeysa xayiraadaha qaar si ay taasi u suurto gasho Shaqooyinka ayaa looga baahan yahay koronapas gaar ahaan shaqaalaha.
– Waxay ila tahay inay aad u khusayso in la eego bal inaan awoodno inaan midba midka kale ka dalbanno inaad keento baasaboorka corona si aad shaqada u gasho, ayuu yiri ku-simaha wasiirka shaqada Mattias Tesfaye (S).
Sharciga horey u jiray ee dowlada ayaa dhacay bilowga Noofambar.
– Haddii ay jiraan shirkado aaminsan in tani ay lagama maarmaan tahay, markaas waxaan u aragnaa inay aad macquul tahay inaad tusto baasaboorka corona oo sax ah si aad shaqada u gasho, ayuu yidhi Tesfaye.
Denmarka ayaa ah wadan sharciyada Yurub badankooda soo saara kuna hormara waxana uu sharcigan noqon karaa mid wadamada kale ay qaataan hadhooti.